Egwu ochie nke ga - eme ka ị daa ma kpọọ ya Factlọ Ọrụ Ọjọọ | Gam akporosis
Villọ ọrụ Ọjọọ na - eme ka ị banye egwuregwu egwuregwu arcade na ndị isi ikpeazụ na - agwụ ike
Izu ụka a anyị nwere ọtụtụ egwuregwu na-abata isiokwu nke ochie na na pixel art nke ahụ na-eme ihe ya iji mee ka anyị nwee obi ụtọ na ihu jupụtara na agba na ụdị ụdị eserese ọ bụla. Ogwe AMOLED ndị ahụ na-eduga anyị ka anyị nwee obi ụtọ dị ka dwarfs pikselụ ndị ahụ na-agafe na ihuenyo n'ụdị dike yi uwe agha ya, ụgbọ ala nke na-esi ebe a gaa ebe ahụ na ọsọ zuru oke ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya nke ibe ha na-ama jijiji na-apụ n'anya ka anyị na-amali site na otu onye ọzọ. Pixel art di na ejiji ma enwere otutu egwuregwu vidio nke jiri ya gosi anyi oge di egwu nke na echere anyi na ha.
Villọ ọrụ Ọjọọ bụ onye ọzọ na-abanye ụgbọ oloko dị elu nke dị ugbu a pixel art iji gosi anyị na arcades na ụfọdụ nkà Max Payne O nwere nke ahụ na nnukwu uru ọ bara. Ma nke ahụ bụ na villọ Ọrụ Ọjọọ na-enye anyị ndị ọrụ egwuregwu na ọgụ oge, oge na-ebelata na ụfọdụ ngwa ọgụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmata etu esi ejikwa ha, ga-enwe ọtụtụ mbibi ike. Ọ bụ ezie na ihe kachasị dị egwu bụ ikike iji belata oge mgbe anyị hapụrụ osisi ahụ ma mezie ka anyị nwee ike chepụta usoro ndị ọzọ nke protagonist nke egwuregwu vidio a dị elu.
1 Kwụsị ajọ òtù Kraken na nkà gị
2 Ndị isi ikpe niile dị nha
Kwụsị ajọ òtù Kraken na nkà gị
Akụkọ a bidoro afọ asatọ gara aga, mgbe ndị ike ụwa mebere International Alliance iji kwụsị otu ajọ Kraken ọjọọ ma gbochie ya iweghara ụwa. Mmekorita were onye oru anyi bu Leo, iji nyochaa ihe merenụ. Will ga-aga na ụlọ nyocha nke Kraken nke Antarctic iji chọpụta atụmatụ ọjọọ ya wee si otú a kwụsị ajọ ihe o kere eke.
Nke a bụ otú akụkọ na-enye ndabere na arcade a na-adọrọ mmasị na ọgụ oge na-amalite nke ị ga - ama etu esi edozi onwe gị nke ọma iji Leo si n'otu ebe gaa ebe ọzọ site na ịhapụ ụdị ngwa ọgụ niile a nke o ji gua. Jikere Dodge, kwatuo ma merie ndị isi nke ụdị niile ma chịkọta akụrụngwa nke ngwa ọgụ dị ike iji bibie ndị iro gị.
Ndị isi ikpe niile dị nha
Anyị ga-achọpụta nke a site na mgbanwe ndị mbụ mgbe anyị chere onye isi anyị ikpeazụ ihu, nnukwu walrus na, yana ole na ole dynamites na onye na-enwu ọkụ, anyị ga-enwe ike iji oke udo kpochapụ ya. Egwuregwu nke na-elekwasị anya n'iji ngwá agha kachasị ike iji gbuo ndị iro, zere mwakpo ha ma mara otú e si eji amamihe na nghọta eme ihe iji ruo ndị isi ikpeazụ ahụ ga-esiwanye ike ka anyị na-enwe ọganihu site na nnukwu arcade a.
Can nwere ike ịhazi dike gị ka ọ daba n'ụdị egwuregwu gị, nke pụtara na ị nwere ike iji uwe ndị ahụ ọ ga - achọta mee ka ọ nwekwuo ike. Nwere aka ahụ ntakịrị RPG site n'inwe ka Leo anyị dịkwuo mma iji nwee ike ịmepụta ngwá agha site na ụgbọ elu ndị ahụ ị ga-ahụ mgbe ị na-agabiga ọkwa niile na-echere gị.
Also nwekwara Arcade ụlọ ị ga-emeghe. Ọ nwere aka ya na-atọ ọchị ma a na-eme okwu ndị ahụ nke ọma iji chọta ụda obi. Ọ dị na Spanish, ya mere enwere ekele na anyị nwere ike ịgbaso akụkọ ahụ ka anyị na-agbagha igwe ahụ na nka anyị na njikwa njikwa na ndị na-egbu ọkụ.
Got nwetara ya site na n'efu site na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya. Nnukwu egwuregwu egwuregwu agaghị echefu.
Ọ maara ka esi egwu kaadị ya niile nke ọma ugbu a graphic larịị bụ nnọọ idiocha. Arụ ọrụ nke menus bụ ihe ijuanya, ka anyị nwee ike ịnweta ọrụ ahụ ngwa ngwa na-enweghị oge ọ bụla. Egwuregwu ịchọpụta na igwu egwu.
Factlọ ọrụ Ọjọọ
Nnukwu ndị isi ikpeazụ
Detune eserese eserese na ihe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Villọ ọrụ Ọjọọ na - eme ka ị banye egwuregwu egwuregwu arcade na ndị isi ikpeazụ na - agwụ ike
N'ikpeazụ, Labs Labet na-akwado ịzụta Terra Bella na Mkpụrụ Okwu
Gam akporo Wear 2.0 wepụtara wepụtara na February 8